Galicia ၏ဒဏ္endsာရီများ - အံ့ဖွယ်ကောင်းသောပြည်၏ဒဏ္|ာရီများ ခရီးသွားသတင်း
လူးဝစ် Martinez | 03/06/2021 10:20 | စပိန်မြို့ကြီးများ, ယဉျကြေးမှု, Espana
နှစ်ပေါင်းရာချီသောသမိုင်းကြောင်းရှိသည့်နယ်မြေတစ်ခု၏စိတ်ကူးယဉ်မှုကိုဂလီစီယာ၏ဒဏ္legာရီများကတုန့်ပြန်သည်။ ၎င်း၏မှောင်မိုက်။ မိုးရာသီရာသီဥတု၊ ကြမ်းတမ်းသောကမ်းရိုးတန်းများနှင့်နက်ရှိုင်းသောသစ်တောချိုင့်ဝှမ်းများသည်လည်းဒဏ္myာရီပုံပြင်များနှင့်မှောင်မိုက်နေသောပုံပြင်များ၏အံ့ဖွယ်ရာများကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းစေသည်။
ထို့ကြောင့်ဂါလိလဲပြည်သည်နေရာအနှံ့အပြားတွင်မတော်တဆမဟုတ်ပါ ဒဏ္storiesာရီပုံပြင်များ။ အချို့သူများသည်အချိန်ကာလ၏အမြစ်တွယ်ခြင်းနှင့်ဥရောပအလယ်ပိုင်းနှင့်မြောက်ပိုင်းတို့တွင်မွေးဖွားခဲ့သောအလားတူအဖြစ်အပျက်များနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ အခြားသူများမှာမူစစ်မှန်သောဌာနေတိုင်းရင်းသားများဖြစ်ကြသည် ရှေးဟောင်းဒဏ္myာရီ။ သငျသညျဒဏ္worldာရီကမ္ဘာကြီးကိုကြိုက်နှစ်သက်လျှင်, ငါတို့သည် Galicia ၏အထင်ရှားဆုံးနှင့်ကျော်ကြားသောဒဏ္legာရီအချို့ကိုပြောပြသွားမည်ဟုအဖြစ်, ဆက်လက်ဖတ်ရှုဖို့သင့်အားဖိတ်ကြားထားသည်။
1 Galicia ၏ဒဏ္endsာရီများ - ထူးခြားသောပါးစပ်အမွေအနှစ်
1.2 ဒဏ္legာရီတစ်ခု၏ကော့စတာ da Morte
1.3 Hercules ၏မျှော်စင်
1.4 မီးသရဖူ၊ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောအလယ်ခေတ်ဒဏ္endာရီ
1.5 Santa María de Castrelos ဘုရားကျောင်းနှင့်ပန်းပဲသမား၏ဒဏ္theာရီပုံ
1.6 San Andrésက de Teixido
1.7 ရှငျဘုရငျ Cintolo ၏ဂူ
Galicia ၏ဒဏ္endsာရီများ - ထူးခြားသောပါးစပ်အမွေအနှစ်
ဒီနေ့အထိအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သောဂလီစီယာ၏ဒဏ္legာရီများစွာသည်ထူးခြားသောကျေးဇူးကြောင့်အချိန်ကာလ၏စမ်းသပ်မှုကိုခံနေရသည် ပါးစပ်အစဉ်အလာ အဲဒီပြည်က။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူအများစုကမျိုးရိုးစဉ်ဆက်မှတစ်ဆင့်ကူးပြောင်းလာတဲ့လူကြိုက်များတဲ့ယဉ်ကျေးမှုမှလာတဲ့မီးပုံအတိုင်းချမ်းအေးတဲ့ညများအကြောင်းကိုပြောကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်နောက်ထပ် ado မပါဘဲ၊ ဒီဒဏ္legာရီအချို့ကိုမင်းကိုပြောပြမယ်။
ဒီတစ်ခါလည်း၊ Galicia ၏အကျော်ကြားဆုံးဒဏ္legာရီ နှင့်အများဆုံးတိုက်ကြီးငါးတိုက်တစ်လျှောက်လုံးထပ်ခါတလဲလဲ။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြောရရင်တော့လူသေတွေရဲ့စီတန်းလှည့်လည်မှုဟာအနာဂတ်မှာသေဆုံးမှုအကြောင်းသတိပေးရန်ဂါစီလီယံနိုင်ငံများမှာညအချိန်မှာရောက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောစီတန်းလှည့်စားမှု၏ရှေ့တွင်ခေါ်ပိုကြီးတဲ့ရောင်စဉ်တတ်၏ Stade တွေ့မြင်သောသူသည်မီးခွက်နှင့်တကွမီးခွက်ပါစေသော။
ငါတို့အရင်ကပြောခဲ့သလိုပဲဒီဒဏ္endာရီဟာဥရောပရဲ့အခြားဒေသများနဲ့ဆက်စပ်မှုရှိတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကဆက်စပ်ခဲ့သည် တောရိုင်း Hunt o Mesnie hellequin ဂျာမန်မြေများ၏။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ဒီလောက်ဝေးဝေးမသွားရဘူး။ အလားတူပုံပြင်များကိုအခြား peninsular ဒဏ္myာရီများတွင်တွေ့ရှိရသည်။ ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ် Güestia Asturias အတွက် ကြောက်စရာ Castile နှင့် အဆိုပါ Corteju Extremadura နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောနေရာများရှိအခြားပုံပြင်များအတွက်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဆားငန်ထိုက်သောကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောဒဏ္legာရီပုံပြင်များကဲ့သို့ပင်ဒီတစ်ခုသည် Santa Compañaကိုတွေ့မြင်ခြင်း၏ဆိုးကျိုးများကိုတန်ပြန်ရန်နည်းလမ်းများလည်းရှိသည်။ သူတို့ကြားတွင်လက်ဝါးကပ်တိုင်တစ်နည်းနည်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းပါ၊ မြေပြင်ပေါ်တွင်စက်ဝိုင်းဆွဲ။ ဖြတ်သန်းသွားစဉ်သို့မဟုတ်အပျော်စီးသင်္ဘောဖြင့်လှည့်ပါ။
ဒဏ္legာရီတစ်ခု၏ကော့စတာ da Morte
ကော့စတာ da Morte
သင်သိသည့်အတိုင်းဂလက်စီယာ၏အနောက်မြောက်ပိုင်းသည်ထိုဒေသဖြစ်သည် ကော့စတာ da Morte o Costa de la Muerte အမည်ရှိဒဏ္legာရီများတည်ရှိရာဒေသဖြစ်သည်။ ပထမတစ်ခုမှာရောမခေတ်မှဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာယင်းသည်၎င်းကိုမှတ်သားထားသည်ဟုယူဆကြသောကြောင့်ဖြစ်သည် finis terraeဆိုလိုသည်မှာကမ္ဘာ၏အဆုံးဖြစ်သည်။
အဲဒီမှာသမုဒ္ဒရာစတင်ခဲ့ပြီးရောမယုံကြည်ချက်အရအဲဒီထဲကို ၀ င်လာသူတွေဟာရေတွေဟာဒါမှမဟုတ်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့သတ္တဝါတွေကိုမျိုချလိုက်တယ်။ သူတို့ရှေ့မှာ Celts သည်ထိုနိုင်ငံများတွင်နေကိုးကွယ်မှုကိုကျင့်သုံးခဲ့သည်။
သို့သော်အဖြစ်မှန်မှာထိုကမ်းရိုးတန်း၏တောရိုင်းများနှင့်ပြင်းထန်သောအတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ၏အင်အားသည်များစွာဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည် သင်္ဘောပျက်။ နှင့်ဤဒဏ္legာရီများအတွက်နောက်ထပ်ပြီးပြည့်စုံသောမွေးမြူရေးမြေပြင်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့တွင်ရေထဲတွင်မြှုပ်နှံခံရသည့်ဒဏ္myာရီဆန်သောရှေးဟောင်းမြို့များ၊ အံ့ဖွယ်ကျောက်ခဲများသို့မဟုတ်အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေသောသန့်ရှင်းသူတို့၏မြို့များတွင် .ရာဝတီ (မကောင်းသောမျက်စိ) ။
ရောမခေတ်ကတစ်ခုတည်းသောမီးပြတိုက်သည်ရပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတွင်နှစ်ပေါင်းနှစ်ထောင်သမိုင်းကြောင်းရှိသည်။ မင်းနားလည်သွားတဲ့အတိုင်းမျှော်စင်ပတ်ပတ်လည်မှာဒဏ္legာရီပုံပြင်များနှင့်ဒဏ္ologicalာရီပုံပြင်များပေါ်ပေါက်လာသည်ကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်။
လူကြိုက်အများဆုံးလူများ၏သောကွောငျ့ဖွစျသညျ Brigantium သို့မဟုတ် Breogan သူတို့သည်terrorရာမကြောက်ကြသည် Geryonသူတို့၏ကလေးများအပါအ ၀ င်အခွန်အမျိုးမျိုးကိုတောင်းခံခဲ့သည်။ သူ့ကိုအနိုင်ယူရန်မဖြစ်နိုင်သည့်အတွက်သူတို့သည်အကူအညီတောင်းခံခဲ့သည် ဟာကြူလီတစ် ဦး duel ဖို့သူ့ကိုစိန်ခေါ်ခြင်းနှင့်သွေးထွက်သံယိုတိုက်ပွဲပြီးနောက်သူ့ကိုအနိုင်ယူသူ။
ထို့နောက်သူရဲကောင်းသည် Geryon ကိုသင်္ဂြိုဟ်ပြီးသူ၏သင်္ချိုင်းအပေါ်တွင်သူသည်မီးအားဖြင့်သရဖူဆောင်းထားသောမျှော်စင်တစ်ခုကိုမြှောက်ခဲ့သည်။ အလွန်နီးကပ်စွာအပြင်၊ သူသည်မြို့တစ်မြို့ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီး၎င်းကိုပထမဆုံးလာရောက်သောအမျိုးသမီးဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည် Cruña, Hercules ပြီးနောက်ရွာအသစ်အမည်ကို Corunna.
Hercules မျှော်စင်နှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ထပ်ဒဏ္endာရီတစ်ခုကထိုနေရာသည်ထိုနေရာ၌ရှိသည်ဟုဆိုသည် Breogánမျှော်စင်။ ၎င်းသည်ပေါ်တူဂီဘုရင်တစ်ပါးပေါ်ထွန်းလာသည့်ဒဏ္Galicianာရီဆန်သောဘုရင်ဖြစ်သည် အိုင်ယာလန်ဒဏ္myာရီအထူးသ၌တည်၏ Lebor GábálaÉrenn o အိုငျးရစျ Conquest စာအုပ်.
ဒဏ္legာရီအရBreogánသည်ဤမျှော်စင်ကိုမြှင့်တင်လိမ့်မည်၊ ၎င်း၏ထိပ်မှသူ၏ကလေးများသည်စိမ်းလန်းသောမြေကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ သူမနှင့်တွေ့ချင်သည်ကသူတို့ရောက်လာပြီးရောက်လာသည် အိုင်ယာလန်။ တကယ်တော့၊ Hercules မျှော်စင်၏အောက်ခြေတွင်ယနေ့ခေတ်တွင်ဘုရင်ဒန်၏ဘုန်းတော်ကိုချီးမြှောက်ထားသောရုပ်တုကြီးကိုမြင်တွေ့နိုင်သည်။
Monforte က de Lemos ၏ရဲတိုက်
Monforte က de Lemos ၎င်းသည်ဂါလီစီယာ၏အထင်ရှားဆုံးသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ဒဏ္endsာရီတစ်ခုမှာအတိအကျကပြောပါတယ် ရဲတိုက် မြို့နှင့် San Vicente del Pino ၏ဘင်နီဒစ်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း လျှို့ဝှက်မြေအောက်ကျမ်းပိုဒ်ရှိခဲ့သည်။
အကြိမ်တစ်ခုမှာ Lemos ၏ရေတွက် သူသည်ဘုရင်ထံမှတာဝန်အချို့ကိုထမ်းဆောင်ရန်ရဲတိုက်တွင်မရှိခဲ့ပါ၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှဆရာတော်ကအရစ္စတိုတယ်၏သမီးထံသွားရောက်လည်ပတ်ရန်ထိုကျမ်းပိုဒ်ကိုအခွင့်ကောင်းယူခဲ့သည်။
သူပြန်လာသောအခါလမို့မြို့မှလူတစ်ယောက်သည်ယဇ်ပုရောဟိတ်ကိုစားရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ သို့သော်အချိုပွဲအချိန်တွင်သူသည်အချိုပွဲအစားသူသည်အနီရောင်ပူသောသံသရဖူကို ပေး၍ သူ၏ခေါင်းပေါ်၌ တင်၍ သေလေ၏။ ယနေ့ခေတ်တွင်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဘုရားကျောင်း၏ဗတ္တိဇံခံယူထားသောစာလုံးဘေးတွင်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၏နာမတော်ဖြစ်သောကံဆိုးဆရာ၏သင်္ချိုင်းဂူကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ Diego Garcia.
Santa María de Castrelos ဘုရားကျောင်းနှင့်ပန်းပဲသမား၏ဒဏ္theာရီပုံ
Santa Maríaက de Castrelos ၏ဘုရားကျောင်း
ဒဏ္ာရီမှာ Vigo မြို့မှာရှိတယ် ကက်စထရို သူမနေထိုင်ခဲ့သည် ပန်းပဲဆရာ ငါနှင့်အတူမေတ္တာ၌ရူးသွပ်ခဲ့ မိန်းမငယ်တယောက်။ သူဟာအသက်ကြီးပြီးသားဖြစ်လို့သူ့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ကြုံခဲ့တာပါ။ ပြီးတော့သူမဟာသူမကိုရတနာတစ်ခုပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။
သူ၏စီရင်ချက်ပျောက်ဆုံးသွားသောအခါသူမသူမကိုပြန်ပေးဆွဲ။ သူ၏ပန်းချီကားတွင်ချုပ်ထားရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ သို့သော်မိန်းမငယ်ကသူမကိုနေ့တိုင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်သွားခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ချာ့ချ်သည်သူ၏အလုပ်ရုံရှေ့တွင်ရှိနေသောကြောင့်ထိုလူကိုလက်ခံခဲ့သည်။
သို့သျောလညျး တစ် ဦး meiga သူဟာပန်းပဲဆရာကိုသွားပြီးမကြာခင်မှာပဲသူသေလိမ့်မယ်လို့ကြေငြာခဲ့ပြီးသူ့ချစ်သူကသူ့ထက်အသက်ငယ်တဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်လိမ့်မယ်လို့ကြေငြာခဲ့တယ်။ ဒေါသဖြင့်မျက်မမြင်သူသည်ပူပြင်းသည့်သံကိုကောက်ယူ။ မိန်းကလေး၏မျက်နှာကိုပုံပျက်စေရန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသို့သွားခဲ့သည်။ သို့သော် ဒိုင်လူကြီး သူကအခြားအစီအစဉ်များရှိခဲ့ပါတယ်။ သူသည်ကာကွယ်ရန်ဗိမာန်တော်၏ဝင်ပေါက်တံခါးကိုချက်ချင်းပိတ်ဆို့လိုက်သည်။ ယနေ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၏တောင်ဘက်မျက်နှာစာကို၎င်းနှင့်တွေ့နိုင်သည် တံခါးကိုပိတ်.
San Andrésက de Teixido
San Andrésက de Teixido ၏ဘုရားကျောင်း
Coruñaမြို့ကဒီသေးငယ်တဲ့စီရင်စုနယ် Cedeira ဒါဟာဘုရားဖူး၏အရာဝတ္ထုတစ်ခုရသေ့ရှိပါတယ်။ ထိုဒေသ၏ဇာတိများကြားတွင်ထိုစကားကိုလူကြိုက်များသည် « San Andrés de Teixido သို့ de morto သို့မဟုတ် foi de vivo သို့သွားသည်» နှင့်စပ်စုဒဏ္toာရီမှတုံ့ပြန်သည်။
အဲဒါပြောတယ် စိန့်အင်ဒရူး ငါမနာလိုဖြစ်ခဲ့သည် စန်တီယာဂိုပြီးသားဘုရားဖူး၏အရာဝတ္ထုဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကသူ့တိုင်ကြားချက်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ ဒိုင်လူကြီးသည်သူ၏ဝမ်းနည်းမှုအားဖြင့်လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်သူကို။ ထို့ကြောင့်လူသေအားလုံးသည်သူ၏သန့်ရှင်းရာဌာနသို့ချီတက်ကြမည်ဖြစ်ပြီး၊ သူမသေပြီးနောက်သူမအသက်ရှင်သူသည်တိရစ္ဆာန်အဖြစ်သို့ပြန်ဝင်သွားမည်ဟုကတိပေးခဲ့သည်။
ဒီဒဏ္legာရီတစ်ခု၏အဆိုအရ San Andrésသည်ကမ်းရိုးတန်းပေါ်ရှိသူ၏လှေနှင့်သင်္ဘောပျက်။ ယနေ့သင်္ဘောသည် Cedeira ကမ်းရိုးတန်းရှိကျွန်းငယ်လေးတစ်ခုဖြစ်သောကျောက်တုံးများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်ဟုဆိုသည်။ အလွန်အံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင်သင်္ဘောပျက်ခြင်းကြောင့်ဘုရားသခင်သည်သူတော်စင်များအားလုံးကိုရသေ့တောင်များသို့သွားရောက်လည်ပတ်မည်ဟုကတိပေးခဲ့သည်။
ရှငျဘုရငျ Cintolo ၏ဂူ
မင်းသမီးငယ်များ၊ ဆိုးသွမ်းသောနတ်ဝိဇ္ဇာအတတ်များကိုပြုကျင့်သောနတ်ဝိဇ္ဇာအတတ်နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသောယောက်ျားလေးများပါ ၀ င်သည့်ဂါလိလဲပြည်၏ဒဏ္throughာရီများမှတဆင့်ငါတို့ခရီးကိုအဆုံးသတ်ပါမည်။
King Cintolo ဂူသည် Galicia တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးအရှည်မီတာ ၆၅၀၀ ကျော်ရှိသည်။ ပြည့်စုံပါတယ် Mariña Lucenseအထူးသဖြင့်၏စီရင်စုနယ်၌တည်၏ သံသယ။ ကောင်းပြီ, ဒဏ္legာရီအရ, ရှေးအချိန်က, theရိယာသာယာဝပြောတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည် Bría၏နိုငျငံတျော အဘယ်သူ၏archကရာဇ်ဖြစ်ခဲ့သည် ခါးပတ်.
ထိုအချိန်တွင်သူ၌လှပသောသမီးတစ်ယောက်ရှိသည် Xila ထိုလုလင်နှင့်အတူနက်ရှိုင်းစွာချစ်သောသူ Uxíoသူကိုစာပေးစာယူသူ။ သူဟာမွန်မြတ်သောသူမဟုတ်ပေမယ့်အစွမ်းထက်မျှောတဲ့အချိန်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုသဘောတူထားပြီးဖြစ်သည် မနီလန် သူက Xila ကိုဇနီးအဖြစ်မလွှဲအပ်ခဲ့ရင်တောင်သူ့နိုင်ငံကိုအဆုံးသတ်စေမယ့်စာလုံးပေါင်းတစ်ခုဖန်တီးမယ်ဆိုပြီးဘုရင်ကိုခြိမ်းခြောက်ခဲ့တယ်။
သို့သော်Uxíoက၎င်းကိုခွင့်ပြုရန်ဆန္ဒမရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်မျှောဆရာအားသတ်ပစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်သူသည်သူ၏စာလုံးပေါင်းကိုပြင်ဆင်ပြီးပြီ ဖြစ်၍ ရဲရင့်သူကိုဘရီးယားသို့ပြန်ရောက်သည့်အခါသူမပျောက်ကွယ်သွားပြီဖြစ်သည်။ သူရှိခဲ့သောနေရာတွင်ဂူဝကိုသာတွေ့ခဲ့သည်။ အပူတပြင်း, သူသည်မိမိချစ်ရာသခင်ကိုရှာခြင်းငှါကဝင်နှင့်နောက်တဖန်မထွက်လာခဲ့ပါဘူး။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်၊ Galicia ၏ဒဏ္ာရီ ပို၍ လူကြိုက်များသည်။ သို့သော်အခြားဆောင်းပါးတစ်ခုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကျန်ရစ်မည့်အခြားအရာများစွာရှိသည်။ သူတို့အထဲ၌၏ Pontevedra ၏အခြေခံအုတ်မြစ်, ၏ paralaia mount, ၏ Bouzas ၏အံ့ဖွယ်အမှု ဒါမှမဟုတ်၏ ပေဒိုတောင်။ Galicia ကိုဝန်းရံထားသည့်အရာအားလုံးသည်မှော်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည်။ ထို့ကြောင့်သင်လုပ်နိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်နေရာအချို့သို့လွတ်မြောက်ရန်နှင့်လှပသောခံစားမှုကိုရရှိရန်အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့် ထိုဒေသရှိကျေးလက်ဒေသခရီးသွားလုပ်ငန်း။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » Getaways ဥရောပ » Espana » Galicia ၏ဒဏ္ာရီပုံများ